“War Waxba igama galin Gool dhalinta aad sheegeysaan.”.- Maxamed Saalax oo furka tuurtay – Gool FM
“War Waxba igama galin Gool dhalinta aad sheegeysaan.”.- Maxamed Saalax oo furka tuurtay
Byare April 1, 2019
(England) 01 Abriil 2019. Maxamed Saalax ayaa furka tuurtay kaddib dhaleeceymo joogta ah oo soo gaarayay oo ku aadan inuu gool dhalin la’yahay isla markaana uu qaadanayo kal ciyaareed xun.
Xiddiga reer Masar ayaan wax gool ah dhalin kulamadii la soo dhaafay balse wuxuu sabab u noqday goolkii guusha ay xalay waqtiga dhimashada ka dhaliyeen Tottenham kaddib markii kubbad uu badaxeeyay iska sii dhaliyay Toby Alderweireld.
26-jirka ayaa kal ciyaareedkii tagay dhaliyay 52 gool dhammaan tartamada isagoona Liverpool gaarsiiyay Final ka Champions League, laakiin Saalax ayaa kal ciyaareedkan dhaliyay 20-gool oo qura dhammaan tartamada.
Maxamed Saalax ayaa la yaaban in isaga la dhaleeceeyo isla markaana kuwa ku goolal ah lagu amaano inay qaadanayaan kal ciyaareedkoodii ugu fiicnaa, wuxuuna hoosta ka xariiqay in gool dhalin aysan waxba ka galin balse uu doonayo Premier League.
Saalax oo hadlay kulankii xalay kaddib ayaa yiri:
“Waxaan helnay saddexda dhgibcood, taasina waa tan ugu muhiimsan. Waxba igama galin goolka.
“Waxaa jira ciyaartooy dhalisay isla goolasha aan leeyahay oo kale waxayna qaadanayaan kal ciyaareedkoodii ugu fiicnaa noloshooda anigana waxaan qaadanayaan xilli ciyaareed xun.
“Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto Premier Leagu, waana tan iigu muhiimsan aniga.
“Jawiga wuxuu ahaa mid waali ah taageerayaashuna way na caawiyeen.
“Taageerayaashu waxay aad u doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka innaguna waxaan sameyn doonnaa wax kasta si ay midaa u dhacdo.”.
Klopp oo ka hadlay dhaawac ka soo gaaray daafaca reer Holand ee Van Dijk, kulankii Tottenham